डिम्याट खाता Archives - Lokpati.com
Tag - डिम्याट खाता
काठमाडौं । डिम्याट खाताको संख्या २५ लाख ३४५ पुगेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार माघ २ गतेसम्म उक्त संख्यामा डिम्याट खाता खोलिएको हो । पछिल्लो समय डिम्याट खाताको संख्या सातामा १ लाखले बढेको छ । पुस...
डिम्याट खाता भनेको के हो? डिम्याट खाता कसरी खोल्ने?
पछिल्लो समय डिम्याट खाता खोल्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसैक्रममा गत सोमबार एकैदिन करिब २३ हजार जनाले डिम्याट खाता खोलेका थिए। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सोमबार (पुस २७ गते) सम्मको तथ्यांक...
एकैदिन खोले २३ हजारले डिम्याट खाता
काठमाडौं। पछिल्लो समय डिम्याट खाता खोल्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसैक्रममा सोमबार एकैदिन करिब २३ हजार जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन् । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सोमबार (पुस २७ गते) सम्मको...